"लामो haired राजा" -, पहिलो यो Salian फ्रैंक्स, एक स्वतन्त्र शाखा बाट भयो जो, फ्रान्सेली राजाहरूको राजवंश नाम थियो Tosandrii बस्ने 420 साल (नदीहरू Meuse र Scheldt बीच), नेता जो को जीनस Merovingian को संस्थापक थियो - Pharamond, धेरै वैज्ञानिकहरू अनुसार, वर्ण mythical । वी संग सम्म वर्तमान समयका फ्रान्स र बेल्जियम को क्षेत्र मा मध्य-आठ शताब्दीपछि पनि Merovingians द्वारा शासन गरिएको थियो।
प्राचीन फ्रान्सको दन्त्यकथा
रहस्य, मिथक र फिक्शन घेरिएको फ्रान्सेली राजाहरूको यो अर्ध-पौराणिक राजकुल। "Novomag" Merovingians आफूलाई भनिन्छ। तिनीहरूले चमत्कार कार्यकर्ता, visionaries र sorcerers, लामो कपाल थियो सबै शक्तिशाली शक्ति छलफल गरेका थिए। , आफ्नो सन्तानहरू रूपमा Pharamond, छोरा Marcomer आंकडा सबैभन्दा Meroveya सहित विवादास्पद। तिनीहरूलाई थुप्रै अस्तित्व, र उनि आफ्नो परिवार मा खराब, आफ्नो नातेदार, को ट्रोजन युद्ध, Aeneas को नायक दस्तावेज छैन पुष्टि गरेर, ट्रोजन राजा Priam सिधै लिन वा छ। रूपमा Merovingians ख्रीष्टबाट descended छन् भन्ने तथ्यलाई छ। केही आफ्नो उत्तरी Rusami.V केही लेख राजवंश क्रमबद्ध लिन्छ Meroveya किनभने तथाकथित भन्न कल। अरूलाई Merowe सामान्य यो दौड मा 13 थियो तर्क।
पहिलो ऐतिहासिक आंकडा, धेरै अनुसन्धानकर्ताहरूले विश्वास मात्र छोरा Meroveya - Childeric। धेरै, तर सबै छैन। सबैभन्दा आफ्नो छोरा को राज्यको साँचो संस्थापक, त्यो छ, नाति Meroveya विश्वास - (। सेन्ट Genevieve को अब चर्च) 30 वर्ष को लागि सफलतापूर्वक शासन र उहाँले पत्रुस र पेरिस पावलको चर्च निर्माण आफूलाई मा गाडे जो Clovis (481-511)। फ्रान्सेली राजाहरूको यो राजकुल महिमा Holdvigom आई थियो अनि मात्र होइन फ्रान्स किनभने यो क्याथोलिक चर्च अपनाए गर्दा र उहाँको बप्तिस्मा नयाँ रोमन साम्राज्य को जन्म भएको थियो। जब यो Frankish, राज्य, यो बाइजान्टियम को "उच्च सभ्यता" तुलना गरिएको छ आकार मा एकदम वृद्धि भएको छ ( "मुक्त" को रूपमा अनुवाद)। यो फस्टाए। को साक्षरता दर पाँच पटक 500 वर्ष पछि त्यो भन्दा उच्च थियो।
तागत र महिमाको राजवंश प्रतिनिधिहरूलाई कमजोरी
को Merovingian राजाहरूको प्रकारको सामान्यतया उल्लेखनीय को मान्छे थिए र अत्यधिक शिक्षित। यस्तो लामो, तर सुरक्षित छैन शासन गर्ने Dagobert द्वितीय (676-679), रूप बुद्धिमानी र कहिलेकाहीं कठोर शासक। उहाँले जो देश बलियो बनाएको सम्राट, हातमा सबै शक्ति केंद्रित, तर भव्य सर्कल र चर्च रुचि थिएन। यो राजा शहीद भए। एक संस्करण अनुसार, उहाँले आफ्नो godson, आफ्नो भाला protknuvshim आँखा आफ्नो निद्रामा मृत्यु भएको थियो। regicide condoned जो चर्च, उहाँले 872 मा canonized। कि पछि, हामी Merovingian अन्तिम साँचो प्रतिनिधि, यो सरकार को दरबार को समय मेयर छ भन्न सकिन्छ। Childeric III (743-751), को Merovingian घर को अन्तिम, व्यावहारिक अधिकार पहिले नै नजिकै। उहाँले सिंहासन7वर्ष को लागि खाली थियो पछि दरबार Pepin छोटो र Karlomanom को enthroned मेयर थियो। कथित उहाँले Chilperic द्वितीय को छोरा थियो, तर त्यहाँ सबै पुरानो Merovingian आफ्नो सम्बन्धन को कुनै प्रमाण छ। स्वाभाविक, उहाँले अधिकारीहरु को हात मा एक खेलौना थियो।
Carolingians र आफ्नो सबै भन्दा राम्रो प्रतिनिधि
Carolingian - फ्रान्सेली राजाहरूको एक राजकुल, को जीनस Meroveya को शासकहरूले प्रतिस्थापित। पहिलो शासक छोटो Pepin III (751-768), crowning अघि उच्चतम अधिकारीहरु Merovings यार्ड मा दरबार, अर्थात् को मेयर थियो जो थियो। उहाँले KARLA Velikogo पिता थियो भन्ने तथ्यलाई लागि ज्ञात छ। Childeric - III Pepin, शक्ति र अन्याय जफत शक्ति, एउटा भव्य राजकुल Meroveya अन्तिम कैद।
एक वर्ष शासन 751 देखि 987 गर्न Carolingian राजकुल, मा, तर फ्रान्स को सम्पूर्ण इतिहास मा मात्र होइन सबै भन्दा उल्लेखनीय व्यक्तित्व चार्ल्स म महान् (768-814) छ। आफ्नो नाम राजवंश नाम दिए। 50 भन्दा बढी यात्राको बनाएको छ जसले सफल योद्धा, यो बढ्तै फ्रान्स को frontiers विस्तार गरिएको छ। रोम मा वर्ष 800 मा, चार्ल्स सम्राट घोषणा भएको थियो। आफ्नो शक्ति बाधित भयो। मुश्किल व्यवस्था शुरू गरेर, उहाँले आफ्नो हात मा सबै भन्दा केंद्रित शक्ति गरे। जो मृत्यु दण्ड को लागि प्रतीक्षा, यो द्वारा स्थापित कानून उल्लङ्घन सबैलाई को slightest दोष लागि। कार्ल अर्धवार्षिक सांसारिक र आध्यात्मिक आचरण को सल्लाह जम्मा गर्ने। साझा निर्णय आधारित कानून बनाउन। सम्राट्लाई र व्यक्तिगत नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका लागि आफ्नो अदालत देश भर यात्रा। निस्सन्देह, मामिलामा को यो पाठ्यक्रम, प्लस सेना को reorganization सकारात्मक परिणाम दिन सकेन। फ्रान्स फस्टाए। तर साम्राज्य आफ्नो मृत्यु संग विघटित। एक योग्य उत्तराधिकारी देखेर छैन, कार्ल आफूलाई बीच warring, allotments छोराहरू दिनुभयो। पछि जारी क्रशिंग।
कार्ल द्वारा सिर्जना साम्राज्य को अन्त
Carolingian को प्रकारको देखि फ्रान्सेली राजाहरूको राजकुल दुई भन्दा बढी शताब्दीयौंदेखि देश शासन, तर यो राजकुल सदस्यहरू बीच थिएन कुनै पनि चार्ल्स म महान् को reminiscent थोडा छ। सम्राट्लाई Berengar म रैंक को अन्तिम शासक 924 वर्ष मा मृत्यु भयो। 962 मा, जर्मन राजा Otto म पवित्र रोमी साम्राज्यको महान् द्वारा स्थापित भएको थियो। त्यो नै यो Carolingian साम्राज्यको उत्तराधिकारी विचार गर्न थाले। 986 देखि 987 वर्ष मा - यो राजकुल अन्तिम राजा एक वर्षको लागि शक्ति थियो जसले लुइस वी आलसी थियो। केही संस्करण अनुसार, उहाँले आफ्नो आमा द्वारा विष थियो। शायद किनभने म अल्छी थियो। र उहाँले आफ्नो मामा को हकदार नियुक्त गर्नुभएको छ हुनत, पादरीहरूले र शक्ति Gugo Kapeta को सिंहासनमा राख्न थियो।
फ्रान्स तेस्रो शाही घर
रूपमा पहिलो नाम द्वारा अनुमान सक्छ Robertino पछि Capet भनिन्छ, फ्रान्सेली राजाहरूको राजकुल, 987g संग शासन।, सिंहासन वैध, Gugo Kapeta मा बसे (शासन 987-996)। यो राजवंश व्यक्तिगत प्रतिनिधि, जानिन्छ थप चार्ल्स चतुर्थ मृत्यु 1328 मा मेला, संग समाप्त यदि त्यो ट्रिलजी मात्र किनभने मौरिस Druon "द श्रापित राजा", अविश्वसनीय सोभियत संघ, र Capetian राजकुल अन्तिम पाँच राजाहरूको शासनकालको समर्पित वर्ष, र पहिलो दुई शासकहरू मा लोकप्रिय छ Valois, को Capetian एक साना शाखा को। फिलिप चतुर्थ फेयर र आफ्ना सबै सन्तान आफ्नो कार्यान्वयन को समयमा Templars को महान् मास्टर द्वारा श्राप थिए।
Branched र बलियो
922 मा वरिष्ठ एड 888, र रबर्ट जूनियर - anjou को गणना, रबर्ट मजबूत को राजवंश संस्थापक को दुई छोरा - शाही परिवार र Carolingians को प्रतिनिधिहरु फ्रान्स राजाहरूको घोषणा गरेका थिए। तर Carolingian सत्तारूढ शाही दौड रह्यो। र पहिले नै Gugo Kapet Valois, Bourbon, Orleanidov को अर्को सत्तारूढ घर साना शाखा थिए किनभने Capet, एक वैध राजकुल, 1848 सम्म शक्ति रहिरहन भने गर्न सकिन्छ जो स्थापित। 987 वर्ष देखि फ्रान्सेली राजाहरूको राजकुल त्यो भू-मध्य सागर गर्न अटलांटिक तट देखि stretching, बलियो monarchical शक्तिमा फ्रान्स परिवर्तन गरेको छैन मात्र यसको branching लागि प्रसिद्ध छ, तर पनि राजाको शक्ति अर्लिन्स गर्न पेरिस मात्र विस्तार जसमा Carolingian fragmented राज्य बाट प्राप्त भएको, भन्ने तथ्यलाई, । यो यसको राजाहरूको सर्वश्रेष्ठ प्रयासमा गरेको थियो - लुइस VI टोलस्टोय (1108-1137), Krivoy को फिलिप द्वितीय अगस्तस (1179-1223), यो घर, सेन्ट लुइस IX (1226-1270) को सबैभन्दा प्रमुख प्रतिनिधिहरु को एक, फिलिप III को बोल्ड (1270- 1285) र, को पाठ्यक्रम, फिलिप उचित चतुर्थ (1285-1314)। उहाँले पूर्ण शक्ति यसलाई गर्नाले, फ्रान्स परिवर्तन, हाम्रो आधुनिक राज्य resembling कुरा।
उपनाम, उमेर मार्फत बाँकी
जसको नाम उपनाम आउँछ फ्रान्सेली राजाहरूको राजकुल, - पनि Capet छ। पहिलो सम्राट Gugo Velikogo को नाम वाहेक पहिलो मात्र XI शताब्दीमा उल्लेख गरिएको थियो। केही अनुसन्धानकर्ताहरूले अनुसार, त्यो प्राप्त उपनाम किनभने तिनीहरूले Abbey टोपी (cappa) लगाउँथे। उहाँले सेन्ट-Germain-डेस-Prés, सेन्ट-डेनिस र धेरै अरूलाई रूपमा प्रसिद्ध विहारको एक धर्मनिरपेक्ष Abbot थियो।
माथि उल्लेख रूपमा, Capet यो विशाल जीनस पक्ष सन्तान अन्य फ्रान्सेली शाही वंशले स्थापित गर्ने को वरिष्ठ शाखा थियो। तालिका तल देखाउँछ माथि-बताए।
Capet (987- 1848) - तेस्रो फ्रान्सेली शासन राजकुल
अर्लिन्स घर -
को पहिलो शासक
ह्यूगो Capet (987- 996)
कार्ल चतुर्थ (1322-1328)
फिलिप VI (1328-1350)
हेनरी III (1574-1589)
हेनरी चतुर्थ (1589-1610)
लुइस xvi (1774-1792 कार्यान्वयन)
Bourbon बहाली (1814-1830)
आखिरी राजा Lui Filipp (1830-1848)
स्मार्ट, कठिन, धेरै सुन्दर
फिलिप फेयर जो चार सन्तान धेरै सफल विवाह, थियो। तीन केटाहरू एकांतर राजा थिए फ्रान्स - चिढिंने लुइस एक्स (1314-1316), फिलिप वी लंबाई (1316-1322), कार्ल आकर्षक चतुर्थ (1322-1328)। यो कमजोर राजा आफ्नो शानदार बुबा टाढा थियो। साथै, तिनीहरूले कुनै छोराहरू थिए, तर बप्तिस्मा पछि5दिन मरेका यूहन्ना म Posthumous, लुई एक्स चिढिंने को छोरा। फिलिपले उचित छोरी राजा एडवर्ड द्वितीय, दयालु को चार्ल्स फेयर को मृत्यु पछि उहाँलाई लगे जो Valois शाखा, मा फ्रान्सेली सिंहासन चुनौती आफ्नो छोरा एडवर्ड III Plantagenet गर्ने अधिकार दिए जो विवाह गरे। यो सय वर्ष युद्ध को शुरुवात गर्न पुगे।
फ्रान्सेली राजाहरूको राजकुल, 14 औं शताब्दीमा शासन गर्न थाले भनिन्छ Valois को राजकुल यसको पूर्वज को Filipp Valua Capet अन्तिम सम्राट को एक भान्जा थियो, (1328-1589)। यो सत्तारूढ घर को शेयर धेरै misfortunes गिर - सबै भन्दा ठूलो जो को Jacquerie (1358) एक रक्तपातपूर्ण युद्ध, क्षेत्रहरूमा, विपत्ति, लोकप्रिय uprisings को हानि। मात्र 1453 मा, फ्रान्स, यसको इतिहास मा umpteenth समय को लागि, आफ्नो पूर्व महानता पाता र यसको पूर्व सीमाना पुनर्स्थापित। र Jeanne d, चाप, अर्लिन्स को नौकरानी वा, धपाउने ब्रिटिश शूलीमा मा जलाए "फ्रेंच गर्न कृतज्ञ"। सेन्ट Bartholomew 24 अगस्ट, 1572 -, यस वंशले शासन आए। र यो शाही घर जस्तै यसको योग्य प्रतिनिधिहरु, थियो फ्रान्सिस आई आफ्नो शासन को वर्ष मा पुनर्जागरण अवधिमा फ्रान्सको आवश्यक फूल र सम्राट निरपेक्ष शक्ति को बलियो बनाउँछ छ। - घर को अन्तिम राजा कान्छो र मनपर्ने छोरा intriguante Ekateriny Medichi (राजाहरूलाई पहिलो थियो फ्रान्सिस द्वितीय , हेनरी III र चार्ल्स IX)। तर आफ्नो छुरा प्रहार कटार fanatical डोमिनिकन भिक्षु Zhak Kleman। हेनरी III "," द कुलीन डे Monsoreau "," चालीस पाँच उपन्यास Aleksandra Dyuma 'Koroleva Margo द्वारा प्रसिद्ध गरे। " छोराहरू छैन गरिएको छ, र Valois राजकुल शासन भएनन्।
मा थियो संस्थापक जो फ्रान्स Bourbon राजवंश राजा, एक समय आउँछ 1589 हेनरी Navarre को चतुर्थ (1589-1610)। को Capetians को साना शाखा को संस्थापक सेन्ट लुइस IX, रबर्ट (1256-1317) SIRE डे Bourbon को पत्नी को छोरा थिए। फ्रान्स यस राजवंश प्रतिनिधिको स्पेन, धेरै restorations गरेपछि तिनीहरूले अन्तमा दृश्य मात्र 1931 मा बाँकी हुँदा, 1589 देखि 1792 र 1814 देखि 1848 को सिंहासन कब्जा। फ्रान्स, 1792 मा क्रान्तिको एक परिणाम रूपमा राजकुल हटाइन्छ र Korol Lyudovik xvi 1793 मा कार्यान्वयन। तिनीहरूले 1814 मा नेपोलियन म को गिरावट पछि सिंहासनमा पुनर्स्थापित थिए, लामो समय को लागि तर - यो 1848 क्रान्तिको अघि। सबै भन्दा प्रसिद्ध फ्रान्सेली को Bourbon राजवंश पाठ्यक्रम राजा, लुइस XIV वा सूर्य राजा। यो शक्ति मा '72 थियो किनभने उहाँले मात्र प्राप्त उपनाम (सिंहासन, उहाँले 1643 मा पाँच वर्षको लिए 1715 मा मृत्यु), तर किनभने उहाँले पकड, प्रकाश, वा रोमन सम्राट को छविमा भाग जसमा सुन्दर इक्वेस्ट्रियन ballets, को सुनको ढाल, सूर्य को reminiscent को हात मा। आफ्नो शासनकालमा धेरै सफलता देश घमण्ड गर्न सकिएन। र XVIII सताब्दी र XIX सदियों को बीचमा को अन्त मा देश हल्लाउँदै कि रक्तपातपूर्ण क्रांतियों, बोर्ड फ्रान्स जनसंख्या Bourbons रुचि थिएन भनेर संकेत गर्छ।
फ्रान्सेली शाही XIX सताब्दी घर
को 19 औं शताब्दीको फ्रान्सेली राजाहरूको प्रसिद्ध राजकुल? यो क्रांतियों द्वारा अवरोध भएको थियो पुनःस्थापित र फेरि अवरोध तथ्यलाई। को XIX सताब्दी मा 1804 देखि 1815 को लागि फ्रान्सेली सिंहासन सम्राट्लाई नेपोलियन म Bonaparte बसे। आफ्नो ढलाउनु पछि, त्यहाँ Bourbons एक बहाली थियो। उहाँले सिंहासन, लुई XVIII (1814-1824), फ्रान्स को 67th सम्राट उक्लनुभयो। शक्ति द्वारा सिंहासनको deprived थियो - उहाँले फ्रान्स अन्तिम राजा, toppled गर्ने थिएन, अन्तिम दुई (1830-1848 चार्ल्स एक्स 1824-1830, लुई-फिलिप) थियो। नेपोलियन म, फ्रान्सेली गणतन्त्र लुई नेपोलियन Bonaparte वा नेपोलियन III को पहिलो राष्ट्रपति को भान्जा अन्तिम Reigning व्यक्ति थियो। फ्रान्सेली सम्राट् रैंक 1854 देखि 1870 उहाँले आफ्नो कब्जा सम्म शक्ति थियो विलियम आई द्वारा थिए पनि वर्गले फ्रान्सेली सिंहासनमा प्रयासहरू, तर यो जोगिन, बाहिर बेचिएको छ, र देश अन्तमा फ्रान्सेली राजाहरूको सबै मुकुट 1885 मा एक गणतन्त्र घोषणा गरे। को XIX सताब्दी मा फ्रान्सेली शाही वंशले कब्जा सिंहासन, को मिति र शासन को अनुक्रम संग तालिका जो तल दिइएको छ।
को XIX सताब्दी मा सिंहासनमा कब्जा फ्रान्सेली राजाहरूको राजवंश
लुइस फिलिप म
Merovingian, Carolingian, Capet (Valois, को Bourbons, Orleanidy सहित) Bonaparte - फ्रान्सेली गरेको शासन राजकुल।
प्राचीन ग्रीस को Sages। प्राचीन ग्रीस को सात Sages
Triumvirate - तीन एक संघ। पहिलो triumvirate र यसको सदस्यहरूलाई
कारणहरू र नतिजा: को 1945 रूसी-जापानी युद्ध
"म्याकडोनाल्ड गरेको" क्रास्नायार्स्क मा: त्यहाँ कसरी? समीक्षा
एक अर्ध-स्वचालित वेल्डिंग पलटनेवाला कसरी चयन गर्न
Biologically सक्रिय पदार्थ
म बुल्गारिया एउटा राहदानी चाहिन्छ? हामी यात्राको लागि आवश्यक कागजात तयार